Famaritana ny vokatra: MYR-505 dia karazana dioxide titanium rutile, izay tsaboina amin'ny fitambarana organika, mifono silika sy oksida aluminium. Izy io dia manana fanoherana ny toetr'andro avo, fidiran'ny solika ambany, fanaparitahana tsara, hery miafina tena tsara, fampisehoana tsiranoka maina tsara.
Dioksida diônôlika malemy 606
Famaritana momba ny vokatra: YMR-606 dia dioxide titanium rutile, izay voatsabo sy nopetahany oksida aluminium silikone. Ity vokatra ity dia manana fotsifotsy tena tsara, fanaparitahana miavaka, herin'ny tinting mahery, fanoherana toetr'andro ambony ary fitaratra.
Famaritana ny vokatra: YMA-110 dia dioxide titanium anatase ho an'ny daholobe. Ity vokatra ity dia misy gloss tsara, fotsifotsy madio, fidiran'ny solika ambany, hery decolorizing avo, coefficient manaparitaka avo, fanaparitahana tsara, atiny maloto ambany, fizarana haben'ny zara-bitika sy tery.
Ny vovoka Lithopone fotsy avo BA311 dia karazana vovoka Lithopone maitso tsy misy poizina, tsy mandoto, izay manana ny toetran'ny fotsifotsy avo kokoa, hery miafina mahery, fahamendrehana, fanoherana ny hafanana avo ary fanoherana ny toetr'andro mahery noho ny lithopone nentim-paharazana.
Fotsy fotsy ambony Lithopone BA312
Vovoka Lithopone fotsy avo BA312 dia karazana vovoka Lithopone maitso tsy misy poizina, tsy mandoto. Ampiasaina be eny an-tsena izy miaraka amin'ny tombony amin'ny fotsifotsy avo sy ny hery afenina avo. Miorina amin'ny BA311 ary manatsara kokoa ny hery miafin'ny vokatra. , Fanaparitahana ary fanoherana ny toetrandro. Ity vokatra ity dia misy oksida amphoterika: silikônika, solika manarona aluminium, fanoherana ny asidra sy alkali, fanoherana ny toetr'andro mahery, fanoherana ny lokon'ny volony, fotsifotsy avo, fanaparitahana tsara, haben'ny poti-panamiana, herin'ny tinting mahery ary hery mampihena, tsy mora aparitaka mavo.
B301 Lithopone dia Lithopone kendrena amin'ny ankapobeny, vovoka fotsy amin'ny fisehoany, tsy misy poizina, tsy misy tsirony, tsy misy fofona, tsy zakan'ny rano, miorina amin'ny simika ary mahazaka alkali, ary mamoaka entona H2S rehefa mihaona asidra.
Ny vovoka B311 Lithopone dia vovoka Lithopone misy tanjona ankapobeny miaraka amin'ny fisehoana fotsy. Miorina amin'ny B301, B311 dia manatsara ny hery miafina sy ny fanaparitahana ny vovoka Lithopone. Izy io dia manana fahamarinan-toerana ara-tsimika matanjaka sy fizarana haben'ny sombina. Pigment fotsy miorina amin'ny diôdiôma titanium.
Kaolin dia mineraly tsy metaly, karazana tanimanga sy vato tanimanga anjakan'ny mineraly kaolinite sy tanimanga. Izy io dia manana toetra ara-batana sy simika tsara toy ny plastika sy ny fanoherana ny afo. Izy io dia manana fampiasana maro karazana, ampiasaina amin'ny fanaovana papermaking, keramika ary fitaovam-pandrefesana, arahin'ireo firakotra, fantsom-bary, vera vita amin'ny enamel ary akora simenitra fotsy, ary plastika vitsivitsy, loko, loko, fikosoham-bary, pensilihazo isan'andro kosmetika, savony, Pesticides, fanafody, lamba, solika, akora simika, akora fananganana, fiarovana nasionaly ary sehatra indostrialy hafa.
Ny fahamendrehana dia mizara ho 325 harato, 600 harato., 800 harato, 1250 harato, namboarina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Kaolin dia mineraly tsy metaly. Izy io dia karazana tanimanga sy vato tanimanga anjakan'ny mineraly tanimanga kaolinite. Ny kaolin madio dia fotsy, tsara, malefaka ary malefaka, misy plastika tsara sy fanoherana afo. Ampiasaina amin'ny fanaovana papermaking, keramika ary akora fanafoanana, ary faharoa ampiasaina amin'ny firakotra, famenoana fingotra, vera vita amin'ny enamel ary akora simenitra fotsy.
Black Oksida vy
Ny vovoka vy dia marevaka amin'ny volo, miaraka amin'ny loko mena, mavo, mainty, maintso sns, ary manana toetra ara-batana sy simika tena tsara. Herin'ny fanafenana matanjaka, herin'ny tinting avo, loko malefaka, fampisehoana marin-toerana, fanoherana alkali, fahamarinan-toerana sasany amin'ny asidra malemy sy asidra tsy fahita, fanoherana hazavana tsara, fanoherana ny toetr'andro, tsy voavaha anaty rano sy solvents organika, fanoherana harafesina tsara Ny anjara asan'ny hazavana ultraviolet.
Modelin'ny vokatra lehibe: mainty oksida vy: 330.722
Red Oxygène vy
Modelin'ny vokatra lehibe: mena oksida vy: H110, Y101, H130, H101, H190, sns.
Yellow Oxygène vy